Matongerwo eNyika, 14 Ndira 2020
Chipiri 14 Ndira 2020
Mapurisa Anorambidza VaChamisa Kuita Musangano Wavo neChitatu
Vachitaura mushure memusangano weStanding Committee yebato bato iri muHarare, mutevedzeri wemutauriri weMDC, VaLuke Tamborinyoka, vati mapurisa arambidza kuti musangano uyu uenderere mberi achiti akabatikana nekuvhurwa kwezvikoro.
VaMnangagwa Vanoenda kuMozambique kuMhemberero dzeKugadzwa kwaVaNyusi
Mamwe madzishe mudunhu reMasvingo ari kuchema chema kuti vagari vazhinji mumaruwa vari kutadza kuwana chikafu cherubatsiro kubva kumasangano akazvimirira kana ku hurumende nekuti havana zvitupa.
Mutongi wematare VaLuke Malaba vanoti vari kuuraya vanhu nemabhemba vanofanira kurangwa nechimbi chimbi
Mutungamiri weNyika, VaMnangagwa, Vanosangana neNhumwa yeMutungamiri weChina, VaWang Yi
Musangano uyu, uyo wapindwawo nemutewedzeri wemutungamiri wenyika VaConstantino Chiwenga, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaSibusiso Moyo pamwe negurukota rezvemari, Muzvinafundo Mthuli Ncube, unonzi wanga wakanangana nekusimbaradza kudyidzana pakati penyika mbiri idzi.
Sangano reARTUZ Rinozivisa Zvinangwa Zvarinoda Kuzadzikisa Mukati Memakore Mashanu Ari Kuuya
Sangano rinomiririra varairidzi vekumaruwa, re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, rinoti kongiresi yaro ichangopera kuitwa muGweru yakabvumirana pamusoro pezvinhu zvavanoda kuzadzikisa mumakore mashanu ari kuuya.
Gurukota reChina Rinoona nezveKudyidzana neDzimwe Nyika Rinopinda muZimbabwe
VaWang, avo vakashanyirawo Egypt, Djibouti, Eritrea neBurundi, vari kutarisirwa kuve munyika kwemazuva matatu, uye neMuvhuro vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa, avo vari pazororo ravo repagore.